Momba anay - Pingxiang Zhongtai Environmental Chemical Packing Co., Ltd.
15 taona ny Famonosana simika traikefa.
Pingxiang Zhongtai Environmental Chemical Packing Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2003.
Mpanamboatra sy mpanondrana matihanina izay manana traikefa mihoatra ny 10 taona amin'ny famonosana simika.
Izahay dia hita ao amin'ny West Section Hi-Tech Industry Park Pingxiang City, faritanin'i Jiangxi, miaraka amin'ny fidirana fitaterana mety.
Ny vokatray lehibe indrindra dia ny sivana molekiola, ny alikaola mihetsiketsika, ny baolina seramika, ny seramika tantely, ny fonosana simika tsy misy fotony sy ny rafitra vita amin'ny seramika, ny plastika ary ny vy, dia azo ampiasaina amin'ny karazana fizotran'ny simika petrochemical sy ny fampiharana ny tontolo iainana.
Ny fitarihantsika fitaovana marani-tsaina
Ny fotodrafitrasa misy fitaovana tsara sy ny fifehezana kalitao tsara indrindra amin'ny dingana rehetra amin'ny famokarana dia ahafahanay manome antoka ny fahafaham-pon'ny mpanjifa. Ankoatr'izay, nahazo mari-pankasitrahana ISO9001: 2008, tatitra SGS, ary mpivarotra azo itokisana ao Alibaba izahay. Vokatry ny vokatra avo lenta sy ny serivisy ho an'ny mpanjifa miavaka dia nahazo tambajotram-barotra eran-tany nahatratra kontinanta fito izahay.
Fivarotana mivarotra mivantana
Mandrosoa ny fandefasana sy ny vidin'ny fifaninanana
Hatramin'ny niorenany, ny orinasanay dia mitazona hatrany ny finoana ny "fivarotana marina, kalitao tsara indrindra, fifantohan'olona ary tombony ho an'ny mpanjifa" Izahay dia manao ny zavatra rehetra hanolorana ny mpanjifanay amin'ny serivisy tsara indrindra sy ny vokatra tsara indrindra. Mampanantena izahay fa tompon'andraikitra hatramin'ny farany hatramin'ny nanombohan'ny serivisinay.
Raha liana amin'ny iray amin'ny vokatray ianao na te hiresaka momba ny filaharana, dia aza misalasala mifandray aminay. Manantena ny hanana fifandraisana ara-barotra mahomby miaraka aminao izahay, ary tongasoa anao ihany koa hitsidika ny orinasanay.